January 3, 2018 – Bachan Tv
नेपाली ख्रीष्टियन युवा मञ्चको पहलमा आर्थिक सहयोग
नेपाली इसाई समुदायमा उदाउदै गरेको नेपाली ख्रीष्टियन युवा मञ्चको पहलमा आज एक विरामीलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । २ महिना अघि मात्र गठन भएको सो मञ्चले इसाई समुदायका निम्ति सकारात्मक कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ ।
धादिङस्थित आशिष चर्चका २२ बर्षिया मिलन तामाङलाई गम्भिर फोक्सोको रोगले ग्रस्त थिए । आर्थिक अभावको कारणले उपचार गर्न सकेको थिएनन् । चर्च लगायत इसाई तथा गैर इसाईहरु चन्दा संकलन गरि उपचारको निम्ति काठमाडौं पठाएका थिए । तर सो चन्दा सकिएकोले थप उपचारको निम्ति आर्थिक संकटमा परेका थिए । सो कुरा मञ्चका महासचिव तुलसी श्रेष्ठले थाहा पाँएपछि उनको उपचारको निम्ति सहयोग रकम उठाउन थाल्नु भएको थियो ।
उनको उपचारको निम्ति हङ्गकङ्गमा बसोबास गरिरहेकी शुम्मा घले (रुथ) को पहलमा रु.३७,२४०÷– नगद मञ्चलाई प्राप्त भएको थियो साथै नेपाल पुर्नरुत्थापन मण्डलीका पाष्टर ओमकुमार श्रेष्ठले नगद ४ हजार उपलब्ध गराउनु भएको थियो भने अन्यबाट २ हजार प्राप्त भएको जानकारी महासचिवले वचन पत्रिकालाई गराउनु भयो ।
मनमोहन अस्पतालमा रहेका मिलनलाई पाष्टर ओमकुमार श्रेष्ठ, विश्वास थापा र महासचिव तुलसी श्रेष्ठले हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । थप उपचारको निम्ति अरु रकम आवश्यक रहेकोले साहयता गरि दिनु हुनको लागि उनको आमाले आवह्रन गरेकी छिन् ।
कानून अन्धो हुन्छ, त्यसले प्रमाणको नाममा जोसुकैलाई अन्याय बोकाउँछ। आज यस्तै भएको छ, चिनीमाया ब्लोनको मुद्दामा । उनलाई बालबालिकामाथि शोषण, मानव बेचबिखनको उद्देश्यले बिना इजाजत ओसारपसार र धर्म परिवर्तनको उद्योग गरेको दोषी करार गरी ३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको कुरा जानकारी पाउँदा “असल गर्नेका हात काटिएको” तीतो अनुभूति भैरहेको छ। उनले २०६८ देखि अनाथ र अभाव झेल्दै आएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने काम गरिन्, स्थानीय मिडियाले उनको खुलेर प्रशंसा गर्यो, तर कोहीकोही डाही बने, समयमा संस्था नवीकरण हुन दिइएन र चरम आर्थिक अभावले बालबालिका राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकी उनले तिनका अविभावकलाई जिम्मा लगाउने भनी काठमाडौं ल्याइन्। त्यसका लागि जिल्ला प्रशासनले उनलाई मौखिक अनुमति पनि दियो, अहिले त्यही कागजको अभावमा उनलाई दोषी तुल्याउने काम भयो । उनलेे ल्याएका बालबालिकाहरूलाई मानवीय सहयोग गरेबापत पा. हरि तामाङले पनि दोषी बन्नुपर्ने ? चर्चमा बालबालिका राखिएकोमा पुलिस र कथित बालअधिकार कर्मीहरूले धर्म परिवर्तनको उद्योग ठाने, चर्च के हो ? के कुनै आराधना स्थल वा मन्दिरमा अप्ठ्यारो भोग्दै गरेका बालबालिकाहरूलाई शरण दिँदा अपराध मान्नुपर्ने मानसिकतालाई सही मान्नू? यस्तै दुराशयपूर्ण प्रमाणलाई आधार मानी माननीय न्यायाधीशले फैसला सुनाउनु त भयो, तर उहाँको विवेकले मानवीय सेवा र कल्याणको पक्षमा अब कस्तो न्याय देख्ला, प्रश्न उठाउनुपर्ने भयो । चिनीमायालाई ३ वर्षको जेल सजाय हुने रे! अनि हरि र पीडित भनिएकै बालबालिकाहरूमध्ये एक बालककी अामा चन्द्रा लिम्बूले समेत सेवा गरेकै कारण डेढ-डेढवर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्ने ? यो कस्तो न्याय ?
अब उच्च न्यायालयको ढोका घच्घच्याउनुको बिकल्प रहेन!